Olee otú iji tọghata RM ka DVD effortlessly
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata RM ka DVD
RM bụ a multimedia akpa format, mepụtara RealNetworks. Ọ na-tumadi ji maka nkwanye dijitalụ ọdịnaya n'elu Ịntanetị. RM faịlụ-apụghị meghere na nza nke software ngwa ma ọ bụ ozugbo egwuri na ụfọdụ ngwaike ngwaọrụ. a nnukwu ina si ọgwụgwụ ọrụ bụ iji tọghata RM ka DVD maka ojiji. Ọ bụrụ na ị na-enwe dị otú ahụ a chọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ, ihe ngwọta ẹkenam ke isiokwu a ga-nditịm enye aka n'ihi na ị.
Ihe ngwọta bụ iji Wondershare DVD Onye Okike, nke effortlessly-enyere gị aka ọkụ RM faịlụ ka DVD discs na elu mma. Nke a smart RM ka DVD Ntụgharị enye gị ohere tinye backgournd music, foto, ederede, wdg na a DVD menu template, otú i nwere ike hazie a persionalized DVD menu n'ihi na gị DVD. Na ndị ọzọ kemfe video edezi ngwaọrụ na-nyere, n'ihi ya, ị nwere ike igbanye a ọkachamara-na-achọ DVD diski na a nkeji ole na ole.
The zuru ezu nkuzi bụ n'okpuru. Ị dị nnọọ na-eso ya nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 mbubata gị RM videos a oké RM ka DVD burner
A na ngwa na-enye gị atọ apụtakarị ụzọ ịgbakwunye gị Obodo RM video faịlụ. Ị nwere ike iji onye ọ bụla n'ime ha:
Na a na ngwa ekpe ebi ndụ, ị nwere ike pịa "+ Import" bọtịnụ chọta gị Obodo RM faịlụ na mgbe mbubata ha.
Na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window, ị dị nnọọ see-acha anụnụ anụnụ gburugburu button, na mgbe ahụ gaa "Tinye Files ..." nhọrọ.
Mgbe ị na-emeghe na nchekwa ebe gị RM faịlụ na-azọpụta, ị dị nnọọ kpọmkwem ịdọrọ RM faịlụ i chọrọ nke a ngwa-ekpe ebi ndụ.
1. Iji nke a kwukwara vidiyo na a ngwa si ​​ebi ndụ na-anọchite anya maka play iji. Ọ bụrụ na mkpa, i nwere ike họrọ otu n'ime ndị video ị chọrọ wee pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window ịgbanwe ya ọnọdụ.
2. Ọ bụrụ na ị mkpa ka ịgbakwunye ọzọ utu aha jikwaa gị videos mma, ị nwere ike pịa bọtịnụ "Tinye aha".
3. Mgbe ị pịa Dezie nhọrọ na otu nke video item Ogwe, a "Video Dezie" window ga-gbapụta. Na nke a window, i nwere ike ịgbalị wepụ ọ bụla nke nke video, enlarge ọ bụla na ihuenyo nke ebe video, ịgbanwe video ìhè, iche, saturation, na olu wdg
Gaa NchNhr taabụ n'elu nke a window, slide ala mmịfe n'akụkụ aka nri, wee họrọ otu n'ime ọkacha mmasị gị ndebiri. Mgbe ahụ, tinye thumbnails, buttons, ederede, ndabere oyiyi ma ọ bụ music wdg a na template hazie gị onwe gị DVD menu. Ọ bụrụ na ị pịa green ala akụ na akara ngosi na n'akụkụ aka nri, ị nwere ike ibudata ọzọ free DVD menu ndebiri anyị online akụ n'ọbá akwụkwọ.
Ịnyagharịa ka "Preview" window site na ịpị "Preview" taabụ na n'elu nke a window. Ebe a, ị nwere ike ịlele finial mmetụta. Ọ bụrụ na ọ dị mma, dị nnọọ laghachi-eme ihe nile ọzọ.
3 Ọkụ RM ka DVD
Ke akpatre, fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski, na mgbe ahụ see "Ọkụ" taabụ na n'elu nke a window. Na-ere ọkụ interface, unu dị họrọ ime ọzọ ntọala dị ka ọkachamara, sịnụ, tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ. Mgbe ị na-see "Ọkụ" button, a na ngwa ga-amalite na-ere ọkụ gị RM faịlụ ozugbo. Ọ gwụla. Ị ga-enweta a playable DVD diski a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ndị size nke mmepụta faịlụ bụ nnọọ nnukwu, a ngwa ga-mpikota onu ya dabara na gị DVD disck.